Eli gcisa liContra iiNkcubeko zePop kwiiPumpkin zeHalloween | Izidalwa ezikwi-Intanethi
IHalloween ikufutshane nekona kwaye ngenxa yayo, Sifumana iindlela ezahlukeneyo zokuya kwiqela le-Anglo-Saxon, ukuba kancinci kancinci ifikile kwezi ndawo ukuyenza ukuba ibe ngumhla okhethekileyo. Ngaphandle kokunxiba ngendlela ekhethekileyo yobusuku beHalloween, zikho ezinye iindlela zokubhiyozela olo suku lukhethekileyo.
Yimbono yomculi ogama linguAlex Wer, nangona kunjalo Uyaziwa njengePumpkin Geek kwi-Instagram, kwaye ngubani onokuchazwa njengokumkani wobugcisa bamathanga. IWebhu, ngexesha leqela lika-2009 leHalloween, xa umfazi wakhe wambuza ukuba angayikrola ilogo yenkampani yakhe kwithanga, wayithatha inkunzi yenkomo ngeempondo wafika kuyo.
Into awayenzayo yayi khetha ithanga esele lenziwe ngesandla, endaweni yenyani yokwenyani, ukuze ihlale ikhona kwaye nexesha alinakonakalisa eyendalo. IWebhu yafumanisa ukuba ithathe iiodolo kwezinye iinkampani ngobusuku kwaye yaqala ukufumana iikhomishini zemifanekiso yabantwana.
Inkqubo yomsebenzi kaWer, apho inokubizwa ngokuba bubuchule bemibala emine, zama ukukrola kubunzulu obahlukeneyo. Ukufezekisa oku kukuba ukusika, amanqanaba amabini ahlukeneyo kunye nolunye umaleko lweendawo ezimnyama zomfanekiso, uyakwazi ukuzoba oko banako engqondweni okanye isicelo somthengi.
Xa kukhanyiswe kakuhle ngaphakathi ithanga, ufumana umfanekiso ocacileyo, njengoko kubonisiwe kwimifanekiso ekwabelwana ngayo apha, iyakwazi ukutsala umdla wakhe nakubani na.
Nganye ye Uyilo oluthandekayo olwenziwe ngesandla luthatha umzobi phakathi kweeyure ezingama-4 ukuya kwezi-6, ihlala ixhomekeke kubunzima bomsebenzi. Isindululo sobugcisa esinomdla sika-Alex Wer onokuthi usifumane I-instagram yakhe ubusuku beHalloween; njengale makeup inye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iimpawu zePop zenkcubeko eziqoshwe kumathanga eHalloween